मलेसि,याको खुला पा,र्कको छा,प्रोमा अलप,त्र नेपाली आमा छोरा ! उ,द्धारको लागि अ,पिल – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मलेसि,याको खुला पा,र्कको छा,प्रोमा अलप,त्र नेपाली आमा छोरा ! उ,द्धारको लागि अ,पिल
मलेसि,याको खुला पा,र्कको छा,प्रोमा अलप,त्र नेपाली आमा छोरा ! उ,द्धारको लागि अ,पिल
मलेशिया । मलेशियाको पार्कमा अलप,त्र सविना र उनको चार वर्षे छोराको उ,द्दार पहलमा सहयोगको अ,पिल गरिएको छ ।
आफ्नो नाम सविना राई (कट्वाल) वताउने अन्दाजी ३८ वर्षकी नेपाली महिला आफ्नो ४ वर्षको छोरा सहित विगत ६ महिनादेखि मलेशियाको एक पार्कमा अलप,त्र अवस्थामा छिन् । उनीराजधानी क्वालालम्पुर नजिकै रहेको सुवाङ्गको, ग्लेनमरी भन्ने ठाउँको सार्वजनिक पार्कमा अलप,त्र रुपमा रहेकी छिन् ।
यो समाचार हिमालटाइम्स बाट लिएका हौं ।